ILufthansa idibanisa usetyenziso lweedatha yezempilo kwityathanga lokuhamba ledijithali
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » ILufthansa idibanisa usetyenziso lweedatha yezempilo kwityathanga lokuhamba ledijithali
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukwaphula iindaba zase-US • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zaseJamani zokuPhula • Iindaba zeMpilo • iindaba • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Tourism • uthutho • Iimfihlo zohambo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba ezahlukeneyo
Matshi 31, 2021
ILufthansa yaqonda elinye inyathelo ekufakweni kwamakhompiyutha kwizatifikethi zovavanyo, isenza ukuba kube lula ukuhamba ngamaxesha obhubhane
Ukwamkelwa kwilizwe liphela, isatifikethi sovavanyo lwedijithali i-CommonPass sinceda ukuhamba ngexesha lobhubhane
Umdibaniso ngoku kunokwenzeka kuzo zonke iinqwelomoya ezisuka eFrankfurt zisiya eMelika
Phambi kokujonga izatifikethi zovavanyo lwedijithali ngoku ziyafumaneka ngaphambi kokuba zibuyise iinqwelomoya ukusuka ePalma de Mallorca ukuya eJamani ukuya kuthi ga kwiiyure ezingama-72 ngaphambi kokuhamba
ILufthansa yazisa ngesibonelelo esitsha sokuya e-US: Abakhweli abaye benza uvavanyo lwe-COVID-19 olwenziwe kwi-Centogene iqabane laseLufthansa ngaphambi kokuhamba ngoku banokufumana iziphumo zabo zovavanyo kwi-app eyaziwayo kwilizwe jikelele i-CommonPass. Oku kusebenza kuzo zonke iinqwelomoya ezisuka eLufthansa Frankfurt Ukuya eUnited States kunye neenqwelomoya ezihambelanayo ezihamba ngeFrankfurt ukusuka eHamburg, eCologne, eBerlin naseDüsseldorf.
Lufthansa Kungoko ibona elinye inyathelo lokufakwa ekhompyutheni kwezatifikethi zovavanyo, okwenza kube lula ukuhamba ngamaxesha obhubhane. Ukongeza kwisatifikethi esitsha sedijithali, i-airline icebisa ukuba iindwendwe zayo maziqhubeke nokuphatha izatifikethi zazo ezishicilelweyo xa zihamba de kubuye kupapashwe.
Abathengi banokuzikhuphelela lula usetyenziso kwiVenkile ye-Android okanye kwi-IOS yeVenkile kwaye emva koko bafake iziphumo zabo zovavanyo kwi-app-emva kokufumana ikhowudi yokufikelela eLufthansa nge-imeyile ngeyure ezingama-72 ngaphambi kokuhamba kwabo. Insiza emva koko ithelekisa ngokuzenzekelayo izatifikethi zovavanyo kunye nezithintelo ezikhoyo zokungena kwilizwe ekuyiwa kulo kunye nokwenza isatifikethi sohambo kwesi sizathu, ukuba luxwebhu lovavanyo olusemthethweni lwendawo efanelekileyo. Isatifikethi sibonisa kuphela ulwazi olufanelekileyo, olufana nesiphumo sovavanyo, indlela yovavanyo, ixesha lokusebenza kunye nekhawuntara yeyure ukusukela ngexesha lovavanyo, kwaye ke ayivezi nayiphi na enye ingcaciso yezempilo. Ukongeza, abakhweli baseLufthansa abasebenzisa usetyenziso lweCommonPass ngaphambi kweenqwelo-moya zabo eziya e-US baya kufumana ukufikelela simahla kwiNdlu yeeNdlu yeeNgwevu kwiSikhululo senqwelomoya saseFrankfurt phakathi kwentsimbi yesibhozo kusasa ukuya kwele-8: 12 ngokuhlwa.
I-CommonPass ingasetyenziselwa kungekuphela ekubhodini, kodwa ikwathabatha indlela yoshishino olunqamlezileyo. Ixabiso elongeziweyo labahambi liya kuphuculwa ngakumbi kukuba kwixa elizayo amanye amaziko anokukwazi ukudibanisa iziphumo zovavanyo, ezinje ngeeholo zekonsathi okanye iimovie. Ubungqina bokugonywa bunokugcinwa kwi-app kwixa elizayo.
Ukujonga kwangaphambili kwezatifikethi zovavanyo lwedijithali
IKomiti eLawulayo ye-Airbus ichaza iSekela lesiGqeba esitsha ...